Isetịpụ Up iCloud Akaụntụ Android
Ị na-ịmafe gam akporo? Gịnị ka ị na-eme ma ọ bụrụ na gị ozi ịntanetị akaụntụ bụ ka na Apple? Bụrụ na ị nwere iCloud akaụntụ na na-eche banyere ịmafe n'elu ka Android, ọ dị mfe ugbu a. Migrating si iCloud ka Android bụ mfe karịa ebi.
N'eziokwu, abụọ usoro adịghị jel ọma ọnụ. Otú ọ dị, Android-enye gị ohere tinye gị iCloud akaụntụ email na ala. Ọ nwere ike na-atụkwasịkwara gị na ekwentị na-wuru email ngwa ka ọ bụla nke ndị ọzọ na akaụntụ email. Agbakwụnye akaụntụ email bụ omume taa ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ịmafe gam akporo. Echegbula ma ọ bụrụ na o yiri tricky - ị ga-dị nnọọ ịbanye a nri nkesa na ọdụ ụgbọ mmiri ọmụma. Ebe a bụ ole na ole nzọụkwụ ga-enyere gị ịgbakwunye gị iCloud akaụntụ email gị Android ngwaọrụ mfe.
Nzọụkwụ mbụ - Mepee App
Stock email ngwa-enye gị ohere ka ịgbakwunye ọzọ akaụntụ email. Gaa gị ngwa ọdịnala na-emeghe Email ngwa na gị android ngwaọrụ. Tapp na menu bọtịnụ na nleta Ntọala. Ọzọ, ị ga-pịa Tinye na akaụntụ.
Nzọụkwụ nke Abụọ
Site na nke abụọ nzọụkwụ, ị ga-amalite amalite mwube gị iCloud akaụntụ. Na-esote ihuenyo, ị ga na-abanye na aha njirimara (nke anya dị ka username@icloud.com) na-aba gị iCloud akaụntụ paswọọdụ. Mgbe abanye ọmụma, i kwesịrị enweta na Manual ntọlite. N'ọnọdụ ụfọdụ, gị iCloud akaụntụ email nwere ike dị ka xyz@icloud.com ebe xyz bụ aha njirimara.
Na-esote ihuenyo, ị ga-ahọrọ ụdị nke akaụntụ gị. Ị ga-enwe nhọrọ n'etiti POP3, IMAP na Microsoft Exchange ActiveSync akaụntụ. POP3 (Post Office Protocol) bụ ndị kasị ụdị na nke gị email na-ehichapụ site na ihe nkesa ozugbo ị ịlele email. IMAP (Internet Ozi Access Protocol) bụ oge a na akaụntụ email, n'adịghị POP3 ọ naghị ewepụ email site na ihe nkesa ruo mgbe ị ihichapụ email.
IMAP na-atụ aro, ya mere, dị nnọọ enweta na IMAP. Ị ga-amarakwa na Pop na EAS ogbugba ndu na-anaghị akwado maka iCloud.
Na nke a nzọụkwụ ị ga-nwere ka ozi nke nkesa na-abata ma na oku nkesa. Nke a bụ ihe kasị tricky nzọụkwụ n'ihi na ọ na-achọ ọmụma a kapịrị ọnụ na-enweghị nke akaụntụ gị ga-arụ ọrụ. E nwere dị iche iche ọdụ ụgbọ mmiri na sava gị mkpa iji tinye. Dị nnọọ tinye ndị a nkọwa na ị na-ọma na-aga.
Nkesa na-abata Ozi
- Email Address- gị mkpa iji tinye gị zuru iCloud adreesị ozi-e
- Username- Tinye aha njirimara gị iCloud email
- Password- Ugbu a, tinye iCloud paswọọdụ
- IMAP server- Tinye imap.mail.me.com
- Nche Type- SSL ma ọ bụ SSL (anabata ndị niile asambodo) ma ọ na-atụ aro iji SSL
- Port- Tinye 993
Ọpụpụ Server Ozi
- SMTP server- Tinye smtp.mail.me.com
- Nche Type- SSL ma ọ bụ TLS ma ọ na-atụ aro ka TLS (anabata ndị niile asambodo)
- Port- Tinye 587
- Username- Tinye aha njirimara ahụ dị ka nke gị iCloud email
- Password- Tinye iCloud paswọọdụ
Mgbe ị na-aga na-esote ihuenyo, ị ga-jụrụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ SMTP Nyocha. Ugbu a, Họrọ Ee.
Ị na-fọrọ nke nta mere; nzọụkwụ ọzọ bụ ihe niile banyere mwube gị akaụntụ nhọrọ. Ị nwere ike ịtọ mmekọrịta oge ka ọ bụla hour, ma ọ bụ na a nkeji oge ị ga-achọ. I nwekwara ike ịtọ gị elu ntọ oge ka otu ihe ahụ. E nwere ndị ọzọ anọ nhọrọ na ị chọrọ ego "mmekọrịta Email", "Send email site na nke a na akaụntụ site na ndabere", "Gwa m mgbe email-abịarute", na "akpaghị aka download Mgbakwụnye Mgbe ejikọrọ Wi-Fi." Ego dị ka mmasị gị na enweta Ọzọ.
Ị na-eme ugbu a! Na-esote na ihuenyo mmekọrịta gị email akaụntụ iCloud na ibudata niile ozi ịntanetị. Ugbu a, ị pụrụ ịhụ gị email, gụnyere edezi na ijikwa ha site email ngwa. Dum usoro-ewe abụọ na atọ nkeji. Niile nzọụkwụ ndị dị mfe, dị nnọọ eso ha ka ọ bụ.
Mkpa Cheta na:
1. Always eji IMAP protocol dị ka ọ bụ ihe kasị Mmanu protocol, nke-enye gị iji nweta gị ozi ịntanetị si dị iche iche ahịa. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị nweta gị ozi ịntanetị na iche iche na ngwaọrụ mgbe ahụ IMAP bụ ihe kasị mma protocol maka gị. Otú ọ dị, na-eme ka n'aka na ị na-abanye nri IMAP nkọwa.
2. Ke nzọụkwụ atọ ị ga-abanye ingoing nkesa ọmụma na oku nkesa ozi. Gị mkpa iji tinye nri n'ọdụ ụgbọ mmiri na nkesa adreesị na-enweghị nke ị nwere ike ọ gaghị enwe ike ịnweta iCloud akaụntụ si Android.
3. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji ya n'elu Wi-Fi ị nwere ike họrọ akaụntụ email nhọrọ dị ka akpaghị aka download Mgbakwụnye Mgbe ejikọrọ Wi-Fi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eji ihe na-arụsi ọrụ njikọ Ịntanetị, ị nwere ike uncheck a nhọrọ. Alternatively, ị nwekwara ike uncheck mmekọrịta nhọrọ iji zọpụta data. Ịnwere ike iji aka mmekọrịta si Email ngwa mgbe ọ bụla ị mkpa ego ị ozi ịntanetị.
4. Gbalịa jikwaa gị ozi ịntanetị si iCloud ukara website, karịsịa na-arụ ọrụ ndị dị mkpa ozi ịntanetị. Dị ka ị na-eji Android email ahịa ka ịnweta iCloud, ijikwa ma ọ bụ ọnọdụ na-ebute ụzọ kwesịrị mere si iCloud.
5. Always eji SMTP Nyocha nhọrọ na-eme ka n'aka na email na-nwetara oge niile gị abanye na. Gbalịa iji ezi nchedo nje software na gị Android ịzọpụta gị mkpa ozi ịntanetị. Ihe, ị ga-ama nzere gị iCloud adreesị na ọ dịghị onye ọzọ.
> Resource> iCloud> otú melite iCloud Akaụntụ na gị Android